ပြည်တန်ဆာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ မိသားစုအကြောင်း - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ပြည်တန်ဆာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ မိသားစုအကြောင်း
ပြည်တန်ဆာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ မိသားစုအကြောင်း
Apann Pyay 10:21 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
မြဝတီဖက်မှာ ဖာခေါ်ချတုန်းက ဖာသည်မလေး ၁၈၊ ၁၉လောက်ပဲ ရှိအုန်းမယ် ကောင်လေးတယောက်က ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ လာပို့သွားတာဘော်ဒါ ၂ ယောက်က ၁ယောက် တလှည့်ဆီ ဗျင်းရင်းနဲ့ … စကားပြောဘာပြောပေါ့ နဲနဲကြာသွားတယ်…
ခဏ နေတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကောင်လေးက အိမ်ရှေ့မှာ တီတီတီနဲ့ ဆိုင်ကယ် ဟွန်းလာတီးတယ်။ ကိုတွေက ဘာအထာလဲပေါ့ …. ဆော်လေးက ခဏလေးအကိုဆိုပြီး အောက်ဆင်းသွားတယ် ကိုတွေက ပိုက်ဆံလဲ မပေးရသေးတော့ ပြန်ရင်လဲ ပြန်ပစေပေါ့ စောင့်နေတာ …
၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ဆော်လေးက ပြန်တက်လာတယ်… အကိုတို့ ညီမ သားလေး နို့အရမ်းဆာနေလို့ ကလေးကို အပေါ်ခေါပြီး နို့ခဏတိုက်ချင်လို့ ခွင့်ပြုပါနော် ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းတော့ ကိုတွေလဲ ခေါ်လာလိုက်ပေါ့ …..
ဆိုင်ကယ် မောင်းပို့ပေးတဲ့ ကောင်လေးပါ တခါထဲ ခေါ်လာပြီး ခဏ နားခိုင်းဆိုပြီး ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ဆောာ်လေးက ကောင်လေးကော ကလေးကော အပေါ်ခေါ်လာပြီး ကလေးကို နို့တိုက်တယ်။ ကိုတွေက အားနေတာ နဲ့ ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ ကောင်လေးကို စပ်စုကြည့်မှ …..
အခု ဖာလာခံတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာပို့ပေးတဲ့ ကောင်လေးက လင်မယားတွေတဲ့ အခု နို့တိုက်နေတာ သူတို့ သားလေးတဲ့
ရင်ထဲ မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားတယ် ….
မိန်းမ ဖာခံဖို့ ယောကျာင်္းက ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ လာပို့ပြီးတော့ ….. ဖာခံနေတဲ့ အမေဆီက နေနို့လာဆို့ရတဲ့ ကလေးလေး သူတို့ မိသားစုအကြောင်း ဆပ်စပ်တွေးပြီး တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ကောင်လေးက ခြေထောက်တဖက် မရှိဘူး အတုတပ်ထားရတာ …. ကောင်မလေးနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပဲ ….. မင်းဘာအလုပ် လုပ်လဲဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတယ် ဒီလိုဖာခေါင်းအလုပ်လုပ်လဲလုပ်ပါတယ်တဲ့သူ့ မိန်းမ က ဒါလုပ်စားတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ …
ကလေးမွေးပြီး ၃ ၄ လလောက် အတွင်း ပိုက်ဆံလဲ မရှိ အလုပ်ကလဲ မဖြစ်တော့ …. အကိုတို့ ပေးတဲ့ ဈေးကလဲ များပြီး …. လူကြီးလူကောင်း ပုံလဲပေါက်လို့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ လင်မယား ၂ယောက်တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ရတာပါတဲ့ ကလေးလေးကို လှမ်းကြည့်တော့ သူ့အမေနို့စို့ရင်း အမေနဲ့ သား စနေကြ ရယ်မောနေကြ တာကို မြင်ပြီး ရင်ထဲ တင်းကြပ်သွားတယ်။
ဘဝ တွေ ဘဝ တွေ ခါးတယ် ဆိုတာ လက်တွေ့ မျက်မြင် မြင်လိုက်ရတယ် ….. အဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာတင် ရှိနေတဲ့ တနှာ စိတ်တွပျောက် ပြီး သဒ္ဒါစိတ်တွေ ပေါက်ပြီးတော့ ……… ဘာမှ ဆက်မလုပ်တော့ပဲ သူတို့ မိသားစုကို ၁သိန်းခွဲ ပေးလိုက်ပီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်
လင်မယား ၂ယောက်လုံ အတင်းကန်တော့မယ်လုပ်တာ မရဘူးဆိုတာကို မရဘူး အတင်း ခြေထောက် ကို လက်နဲကိုင်ပြီး ထိုင်ကန်တော့သွားကျတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ကျော်လောက်က အခြေအနေလေး တခုပေါ့ ဒီလိုဘဝတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ် အဓိကက ကိုယ်ချင်းစာ တရားရှိဖို့ပါပဲ…
ဒီအကြောင်းအရာကို ပို့ပေးလာတဲ့အကို တစ်ယောက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။